Maraykanka, 06 May 2018
Axad 6 May 2018
Muranka Heshiiska Nukliyeerka ee Iran
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani ayaa maanta sheegay in haddii Maraykanku uu ka baxo heshiiskii ay dunidu la gashay dalkiisa ay taasi Washington ka qoomameyn doonto.
W.Ameerika: Caqabadaha Shaqo ee Soomaalida Wax Baratay
Iyadoo heerka shaqo la’aanta Mareykanka la sheegay in dhowr iyo toban sano kadib ay hoos u dhaceyso, ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ah ee dhammeeya jaamacadaha Mareykanka iyo Canada, waxa mararka qaar ay la kulmaan caqabado xagga shaqo helista, taas oo saameyn ku yeelata mustaqablkaooda dambe.
Giuliani: Trump wuu guday lacagtii la siiyey Stormy
Duqii hore ee magaaada New York, Rudy Giuliani ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu dib ugu guday qareenkiisa Michael Cohen lacag dhan 130,000 oo dollar oo uu siiyey gabar jisha filimada galmada, si aysan uga sheekeyn xiriir la tuhunsan yahay inay Trump la yeelatay 2006-dii.
Trump oo weeraray Robert Mueller
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Talaadadi shalay mar kale weerar afka ah ku qaaday Guddiga Gaarka ah ee baaraya suurtagalnimada in Ruushka uu faragelin ku sameeyay doorashadi madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sannadki 2016-kii.
Maxaa xal u ah dilalka Soomaalida Ohio?